20 Zoos kacha mma na US ileta na aquariums kacha njọ ekwesighi
By Victoria Akpan TMLT September 10, 2021 Travel 0 Comments
- zoos kacha mma na US -
Na US, ị nwere ike họrọ site n'ọtụtụ ebe nlegharị anya anụmanụ dị ka zoos na aquariums. Ọzọkwa, n'eziokwu, enwere ike ịhụ zoo n'ime ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nnukwu obodo niile dị na United States, mana nke ahụ apụtaghị na ha niile bụ otu.
Anyị achịkọtara ndepụta nke ụlọ ezumezu kacha elu ị ga -eleta na United States, bụ ndị kpokọtara nchịkọta anụmanụ dị ịtụnanya site n'akụkụ ụwa niile iji cheta ma chekwaa anụ ọhịa ụwa.
Ị ga -ekpughekwa akwarium kacha elu ileta na United States, yana zoos kacha njọ na mba ahụ. Gaa n'ihu ịgụ iji mụtakwuo.
Ogige 20 kacha mma na US
Ebe ọ bụ na Alaska mara maka ya ọdịdị na anụ ọhịa, ọ nwere ezi uche na ọ nwere nnukwu ụlọ ọrụ dịka Ogige Alaska igosi anụ ọhịa nke ala ya.
Ogige Alaska, nke mepere na 1969 ma bụrụ naanị zoo steeti ahụ kemgbe ahụ, dị na Anchorage.
Ọ dị mma ịmara na anụ ụlọ ahụ malitere site na nwa, n'agbanyeghị na ọ nwere ọtụtụ ụmụ amaala Alaska dị ka lynx Canada na anụ ọhịa pola. Ọ bụ onye na -ere ihe n'obodo ahụ meriri enyí ahụ n'ime egwuregwu ahụ.
Enwere ike ịhụ ọtụtụ anụmanụ na-abụghị ụmụ amaala, dị ka agụ owuru snow na ụgbọ mmiri Tibet, n'etiti anụmanụ anụmanụ ruru 100.
Mba Bear USA
Mba Bear USA Ogige anụ ọhịa na -enye ahụmịhe dị iche. Ihe pụrụ iche nke ebe a na Rapid City, South Dakota, bụ na ọ bụ ogige ntụrụndụ nwere ike ịnweta site n'ụgbọ ala ebe ị nwere ohere ịhụ ihe e kere eke n'ụgbọ ala gị.
Mgbe ị na -aga Ugwu Rushmore, nke a bụ ebe a na -ewu ewu. Ị ga -abịaru nso na anụ ọhịa wolf, anụ ọhịa bea, na anụ ọhịa ndị ọzọ dị na North America ka ị na -akwa site na hekta 200 nke ọhịa na ahịhịa.
Ndị ọbịa ahụ dị 4,444 mere njem dị kilomita atọ gburugburu ogige ahụ, na-agafe ihe mgbochi dị iche iche wee soro ndị bi n'ogige nso na-akpachi anya.
Omaha Henry Doorly Zoo na Akwarium
Omaha Henry Doorly Zoo nwere ike ịzọrọ aha nke nnukwu ụlọ zoo na United States. Nke ahụ bụ ma ọ bụrụ na echebara mpaghara ala ya niile na ọnụọgụ nke ụdị.
Ogige Anụmanụ Riverview, nke mepere na 1894, ugbu a bụ Nebraska Zoo. Ọ dị hekta 130 n'ịdị elu na ebe obibi ihe karịrị ụdị 900 dị iche iche. Henry Dolly Zoo eguzobela onwe ya dịka onye ndu na nchekwa na ọmụmụ anụ ọhịa n'afọ ndị gara aga.
Ị ga -enwe ike ịhụ rhinos, agụ, ọdụm, na enyí na anụmanụ a na -ewu ewu, ị ga -ebili nke nwere shark na nduru na akwarium dị na saịtị.
Oge Awa Omaha
Awa n'ime oge okpomọkụ:
9 am ruo 5 pm Kwa ụbọchị | Ụlọ na -emeghe ruo elekere isii nke mgbede
Kwa ụbọchị 10am ruo 4pm | Ụlọ na -emeghe ruo elekere ise
Ewezuga ụbọchị ekeresimesi, ụlọ oriri na ọ isụ isụ na -emeghe afọ niile.
Biko kpọọ (402) 733-8401 n'oge ihu igwe adịghị mma.
Ihe efu Ị nwere ike ime na Tucson
Ihe efu ime na Fresno
Ihe ị ga -eme na Mesa
Free Ihe ị ga -eme na Sacramento
Ihe efu ị nwere ike ime na Nashville
Ihe malitere dị ka onyinye abụrụla ihe dị mkpa. Denver Zoo, ụlọ ọrụ ọsụ ụzọ na Colorado, hiwere na 1896 mgbe enyere onye isi obodo Denver onyinye nwa bebi America.
Ọzọkwa, Denver Zoo bụ zoo mbụ na United States itinye ebe obibi eke n'ime ihe ngosi ya iji kwalite ọdịmma anụmanụ. Kemgbe ahụ, ụlọ ezumezu a agbasiwo mbọ ike ịgbasa ọrụ nchekwa ya karịa ụmụ anụmanụ, na-ewepụta atụmatụ nchekwa kọntinent ụwa anọ.
Ndị ọbịa 4,444 nke Denver Zoo nyere aka na mbọ ndị a, ha nwekwara ike ịhụ ihe karịrị anụmanụ 3,500 na -anọchite anya ụdị ihe karịrị narị anọ.
Tụkwasị na nke ahụ, a na-ama ọnụ ọgụgụ biar nke zoo, mana a na-ahụkwa ya maka agụ agụ Siberia, enyí Asia, na ihe ngosi Stingray Bay pụrụ iche.
Ogige Anụmanụ Houston
N'obodo ukwu dị ka Houston, ọ bụghị ihe ijuanya Ogige Anụmanụ Houston bara uru ịtụle. Ebe a na -edebe anụ ọhịa nke Houston dị na etiti Texas, kpuchie acres 55, ọ bụkwa ebe kachasị kwụ ọtọ ị ga -aga mgbe ị na -eleta obodo ahụ.
Ọ nwere ihe dị ka anụmanụ 6,000 na -anọchite anya ụdị 900 dị iche iche sitere n'akụkụ ụwa niile. Ogige Anụmanụ nke Houston nwere ike ịnabata mkpa gị, ma ịchọrọ ilele gorillas na ịnyịnya ọhịa Africa, anteater South America, ma ọ bụ anụ ọhịa Texas.
Ọ na -enyekwa ohere ịkpọtụrụ anụmanụ nke ọma, gụnyere izute enyí, okapi, na mbe Galapagos.
Ogige Zoo Fort Worth
Na Texas, ị ga -ahụ ọtụtụ nnukwu anụ ọhịa, mana Fort Worth Zoo bụ arụmụka steeti na -enye na zoo kacha mma na United States.
mgbe Ogige Zoo Fort Worth nke mbụ mepere na 1909, nhọpụta ụmụ anụmanụ dị oke oke, mana ọ tolitela ngwa ngwa kemgbe ahụ wee nwee anụ ụlọ 7,000 nwere ihe karịrị ụdị 540.
Ihe ngosi abụọ kacha ewu ewu bụ World of Primate Exhibit 2.5-acre, ebe ị nwere ike ịhụ ụdị enwe anọ niile, yana ebe ngosi nka nke nka nka (MOLA), ebe ọtụtụ anụ na-akpụ akpụ na anụ ọhịa bi n'ụlọ anụmanụ.
Iji hụ anụmanụ ala California dị iche iche na otu n'ime ụlọ ezinaụlọ kacha mma na United States, naanị gaa na Oakland Zoo.
Na nso nso a, a Ogige Oakland wepụtara ihe ngosi ụzọ ọhụrụ na California, na -egosipụta ụdị ụmụ anụmanụ dịka bea grizzly, anụ ọhịa wolf na -acha isi awọ, na bison.
Mana enwere ihe ngosi na akụrụngwa ndị ọzọ na 100 acres nke Auckland Zoo, gụnyere ụlọ ọgwụ anụmanụ nke ụwa na nnukwu ogige nru ububa.
Auckland Zoo bụ ebe obibi ugbu a karịa anụmanụ 700 na mpaghara na osisi, dị ka anụ ọhịa bea, giraff na -enwu enwu, na adaka.
Ọ bụ ezie na ọ dị ugbu a na Ogige Knowland na Oakland Hills, zoo dị na etiti Oakland mgbe ebido ya na 1922.
N'ime ọtụtụ ụlọ ezinaụlọ ndị dị na mba ahụ, Zoo Miami bụ naanị mpaghara mmiri zoo. Kọntinent United States. Ọ bụrụ na nke a ezughị ime Zoo Miami pụrụ iche, ọ na -emekwa ka ọ bụrụ nnukwu na zoo kacha mma na Florida.
A na-akpọ nke a ogige Miami-Dade Gardens na Zoo, nke mepere na 1948 wee kwaga ebe ọ nọ ugbu a na 1980.
Isi ihe kpatara na Miami Zoo nwere ihu igwe dị n'okpuru ala bụ na ọ na -enye gburugburu ebe ọkụ. Ọzọkwa, gburugburu iru mmiri nke anụmanụ zoo bụ ndị Asia, Australia, na Africa.
Anụmanụ ndị a gụnyere ụdị osisi dị iche iche dị ka mgbata mmiri nke Malayan, dragọn Komodo, na kangaroos fir, yana nwa oge ochie dịka gorilla na ọdụm.
The Zoo Philadelphia nke akpọrọ “zoo mbụ nke mba,” bụ ụlọ ọrụ a hụrụ n'anya nke bụ n'ezie otu n'ime zoos kacha mma na United States. Akwadoro nke a maka eziokwu bụ na ọ bụ otu n'ime ụmụ anụmanụ kacha ochie na mba ahụ.
Philadelphia Zoo mbụ mepere ụzọ ya na 1874, n'agbanyeghị na edeghị ya n'akwụkwọ ruo 1859, obere oge tupu agha obodo, na -eme ka ọ bụrụ zoo mbụ na United States.
Akụkọ ihe mere eme nke zoo a abụghị naanị ihe na -eme ka ọ pụta ìhè; n'etiti ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ anụmanụ 1,300 ya bụ ọtụtụ ụdị ihe egwu. Enwere lemurs ojii na -acha uhie uhie na ọcha, agụ Amur, na nnukwu otters na acres 42 nke ogige ahụ.
Zoo Saint Louis
O siri ike ịtụrụ ime ihe kpatara na ịgaghị eleta Zoo Saint Louis na Missouri, ọkachasị ebe mbata bụ n'efu. Anụmanụ a, nke dị na Forest Park na ọdịda anyanwụ obodo ahụ, bụkwa otu n'ime obodo kacha mma.
Zoo Saint Louis, nke a na -akpọbu Saint Louis Zoological Park, nweere onwe ya maka ọha n'ihi ego gọọmentị. Nke a pụtara na onye ọ bụla nwere ike ịbịa hụ anụmanụ 13,000 nke zoo na -anọchite ụdị 555 dị iche iche.
Pandas na-acha ọbara ọbara, anụ ọhịa bea, sloths nwere ụkwụ abụọ, puffins, na ihe na-akpụ akpụ na anụ ọhịa dị iche iche so na ihe ngosi zoo.
Ugwu Zoo Cheyenne
The Ugwu Zoo Cheyenne na Colorado Springs bụ zoo ọzọ na steeti Colorado. Zoo Cheyenne Mountain Zoo bụ ụlọ kacha ogologo na United States, nke ịdị elu ya dị mita 6,800 karịa oke osimiri.
Anụmanụ a, nke onye ọrụ afọ ofufo Spencer Penrose hiwere na 1926 ka ọ bụrụ ebe obibi maka nchịkọta nke anụmanụ ndị dị ndụ, etoolala ịnabata anụmanụ 800 na -anọchite anya ihe karịrị ụdị 200.
Ihe karịrị 30 n'ime ụdị ndị ahụ, gụnyere rhinoceroses ojii na lar gibbons, nọ n'ihe ize ndụ.
Ndị ọbịa nwekwara ike buru ihe nrịgo elu ugwu Mountaineer Sky Ride, nke na -agafe ogige grizzly na Amur tiger, maka echiche ọhụrụ banyere anụmanụ.
Enwere ọtụtụ zoo zoo na New York, mana Ogige Bronx bụ enweghị obi abụọ otu n'ime ihe kachasị mma.
Ebe a na -edebe anụ ụlọ dị n'akụkụ Osimiri Bronx na Bronx Park ma nwee hekta 265, na -eme ka ọ bụrụ otu n'ime nnukwu ụlọ ezumezu obodo.
Mgbe a na-emepe Bronx Zoo na 1899, ọ malitere ọdịnala dịte aka maka ahụike na nchekwa anụmanụ site na imepe ụlọ ọgwụ anụmanụ anụmanụ ọgbara ọhụrụ nke mbụ na 1916.
Ọzọkwa, mgbe ị gara taa, ị ga -enwe ike ịhụ ihe dị ka anụmanụ 6,000 site na ụdị 700 dị iche iche, sitere na nnukwu nwamba dị ka agụ, ọdụm na gorillas ruo obere anụmanụ dị ka lemurs na ihe na -akpụ akpụ.
Columbus Zoo na Akwarium
Ụlọ Columbus Zoo na Akwarium dị na Columbus, Ohio.
Ma ọ bụ Columbus Zoo na Akwarium bụ zoo kacha mma na Ohio, acres ala ya dị 580 na -eme ka ọ bụrụ otu n'ime ụlọ ezumike kacha ibu na mba ahụ.
Anụmanụ a na-anaghị akwụ ụgwọ, nke dị na mgbago ugwu Columbus na Liberty Township, bu ụzọ mepee ụzọ ya na 1927, mana ọ gbasawanyela ịgụnye ebe egwuregwu golf ya nwere oghere 18.
A na -ahazi mbara ala Columbus Zoo na Akwarium gaa n'òtù ngosi asatọ, nke ọ bụla na -anọchite anya mpaghara ụwa dị iche iche.
Nke a pụtara na n'ime ihe okike 7,000+ na -anọchite anya ihe karịrị ụdị 800, ị nwere ike ịhụ ihe niile site na agụ owuru na bobcats ruo penguins na kangaroos.
Ogige Anụmanụ San Diego na Safari Park
Akụkọ mgbe ochie San Diego Zoo bụ zoo kacha mma na California, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ụwa niile. Ogige Anụmanụ San Diego, nke mepere na 1916 na Ogige Balboa, aghọọla ebe nlegharị anya n'obodo ukwu na ọ bụ ebe nlegharị anya kacha eleta na United States.
Otu n'ime ihe kpatara nnukwu ewu ewu zoo bụ ụdị dịgasị iche iche dị ịtụnanya, nke gụnyere ihe karịrị puku atọ na narị ise sitere na ụdị 3,500 dị iche iche.
E kewara anụ ọhịa ahụ na ngosipụta asatọ iji chekwaa ọnụ ọgụgụ anụ ọhịa dị iche iche, nke ọ bụla nwere ọdịdị ala ya ma ọ bụ ebe obibi ya.
Ọzọkwa, ihe ngosi Outback, nke nwere anụmanụ Australia dị ka koalas na ndị mmụọ ọjọọ Tasmanian, abụrụla ihe ngosi San Diego Zoo kachasị ewu ewu n'afọ ndị na -adịbeghị anya.
Ebe obibi anụ ọhịa Brevard dị na Florida bụ otu n'ime ụlọ ezinaụlọ kachasị elu n'ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ nke United States. Ebe obibi anụ ụlọ Brevard, nke dị na Melbourne, na -elekwasị anya na mmekọrịta na usoro okike iji jikọọ na anụmanụ.
N'ugbo a dị hekta 75 na ala Florida, ihe karịrị anụmanụ 900 na-anọchite anya ihe karịrị ụdị 195 dị ndụ.
Enwere ike ịchọta anụmanụ sitere n'akụkụ ụwa niile ebe a, mana enwerekwa ụmụ anụmanụ Florida dị ka nwa ojii Florida na agụ iyi America.
Njem nlegharị anya Kayak na zip-linin so na ihe omume dị na Brevard Zoo, dịkwa ka nnụnụ na-eri nri na iji kangaroos na-awagharị.
Ogige Park Woodland
The Ogige Park Woodland na Seattle bụ ọmarịcha ụlọ zoo America ọzọ kwesịrị ka ekwuru ya, nwere ogologo akụkọ gbasara nchekwa anụ ọhịa.
Ọzọkwa, Woodland Park Zoo, nke hiwere na 1899, dị na mpaghara Phinney Ridge nke Seattle.
E kewara ihe ngosi nke zoo n'ime mpaghara bioclimatic, agbanyeghị, enwere gburugburu anụmanụ 900 na -anọchite anya 250 ma ọ bụ karịa ụdị gbasaa na acres 92 ya.
Nke a pụtara na ị ga -eleta ihe ngosi dị iche iche iji hụ anụmanụ kacha dị ịtụnanya na zoo, dị ka agụ owuru snow, nkịta ọhịa na -efe efe, na hippopotamus.
Tụkwasị na nke a, Woodland Park Zoo na -eduzi mmemme kwa afọ na ihe omume Zoo, nke gụnyere nlele biya sitere na ebe omume biya dị iche iche.
Ebe obibi ọzara na ogige
Ebe obibi ọzara na ogige dị ndụ bụ otu n'ime ụlọ ezinaụlọ kacha ibu na United States, yana mkpokọta 1,800 acre.
Ọzọkwa, Zoo na Ubi Ọzara dị ndụ, nke dị nso na Palm Springs, California, na -egosi ahịhịa na anụ ọhịa n'ọzara kemgbe 1970.
Ahapụla akụkụ buru ibu nke ogige anụ ọhịa ahụ na ọnọdụ ebumpụta ụwa ha, na -enye ụlọ maka ihe dị ka anụmanụ 450.
Anụ ụlọ zoo na -esite n'akụkụ ụwa niile, gụnyere wallabies nke Australia, anụ ọhịa wolf Mexico si North America, na cheetahs ndị Africa na Iran.
Ndị ọbịa nwere ike iso ụmụ anụmanụ na -emekọrịta ihe, na -eri nri giraffes, na -enwe anụrị na ụzọ mkpagharị na mgbakwunye ileta ihe ngosi anụmanụ.
Mgbe ị na -eme atụmatụ njem na Chicago, ndị ọbịa kwesịrị icheta ịgụnye Zoo Brookfield n'usoro njem ha. Ogige Zoological Chicago, dị ka amaara ya nke ọma, bụ ụlọ zoo 216 acre dị na Brookfield, Illinois, nke a ka nwere ike ịnweta site na ogbe ndịda.
Zoo Brookfield, nke e wuru na 1934, bụ onye mbụ jiri moats na ọwa mmiri dị ka ogige kama ime ngịga. Chicago Zoological Society, nzukọ anaghị akwụ ụgwọ raara nye ahụike na nlekọta anụmanụ, na-elekọta ụlọ zoo.
Ọ bụ ezie na ị nwere ike ịlele orangutan, pangolins, na hippos pygmy ebe a, Zoo Brookfield nwekwara Mmemme Nnochite Anụmanụ nke na -enye ohere ka ndị ọbịa bilie ma hazie ụfọdụ ụdị.
Njem nlegharị anya nke Lion Lion
The Njem nlegharị anya nke Lion Lion na Florida bụ ihe akaebe na ịnya ụgbọ ala anụmanụ adịghị obere mana ọ bụghị ihe pụrụ iche na United States. Ogige ntụrụndụ a, nke dị n'ime ime West Palm Beach, nwere ihe karịrị hekta 600 nwere ebe obibi maka anụ ọhịa ya.
Na njem maịl anọ site n'akụkụ asaa dị iche iche nke mpaghara bioclimatic, ndị ọbịa nwere ike chọpụta Lion Country Safari site na okomoko nke ụgbọ ala ha.
Ọzọkwa, n'ụgbọala, ị ga-ahụ ihe ndị e kere eke dị ka nwa giraffes, ọdụm Africa, na kudu, mana enwerekwa ngagharị safari nwere nnụnụ, ihe na -akpụ akpụ na obere anụ na -amalụ aras.
Na Lion Country Safari, enwere ogige ntụrụndụ na ebe a na-azụ anụ ụlọ na ogige mmiri nwere ihe mmịfe na ihe omume enyi na enyi ndị ọzọ.
Memphis Zoo bụ ihe ncheta Tennessee dị mpako, ebe e guzobere ya ihe karịrị otu narị afọ. Ogige Memphis dị na Overton Park na Midtown Memphis kemgbe 1906 wee kpuchie ihe dịka hekta 76.
A na-ekewa ụlọ ezumezu ahụ na mpaghara atọ, nke ọ bụla nwere ihe ngosi 19 nke chọrọ ije kilomita 2 iji wuchaa ya. Ọzọkwa, Memphis Zoo bụ ebe obibi ihe dị ka anụmanụ 3,500 sitere na ụdị 500 dị iche iche n'ofe ụwa.
Ọ bụ ezie na nnukwu ihe ngosi panda nke zoo bụ otu n'ime ewu ewu ya, echefula hippos Osimiri Zambezi Hippos na agụ iyi Naịl, ma ọ bụ jaguars na capybara nke Cat Country.
Top 10 Aquariums na Zoos kachasị njọ na USA
1. Ogige Anụmanụ eke eke
The Zoo eke eke anọgidewo na ndepụta anụ ọhịa kacha njọ maka enyí n'ime afọ asaa gara aga. Ọzọkwa, zoo n'okporo ụzọ nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmebi iwu Iwu ọdịmma anụmanụ 150 na ndekọ ya.
Asha, enyí bi, na -enye ọtụtụ narị ndị ọbịa njem kwa afọ ma na -enwe mmerụ ahụ anụ ahụ ma ọ bụrụ na o rubere isi.
Anụmanụ ndị ọzọ, dị ka macaque nke egosiri n'elu, ka a na -eleghara anya maka mmerụ ahụ na -agwọghị ya ruo ọtụtụ izu.
2. Ogige Anụmanụ Monterey
A na -akpọsa Monterey Zoo ka ọ bụrụ 'ụlọ ezumike nká' maka enyí, n'agbanyeghị na nke a adịghị. Nke a bụ ihe kpatara ya Ogige Anụmanụ Monterey a na -ewere ya dị ka otu n'ime ihe kachasị njọ na United States.
Enyí ha anwụọla nkezi mgbe ọ dị afọ 22, nke dị obere. Ha nwụrụ n'ihi ọrịa nke ajọ ọnọdụ e debere ha, ọ bụghị site na nká.
3. Ogige Anụmanụ Bronx
The Ogige Bronx a nabatara ya, mana ọ họrọla ịjụ nyocha gbasara ebipụta elephant. Obi ụtọ na Patty, enyí Asia ha na -ebi na nzuzo.
Nke a na -efegharị n'ihu usoro ọdịmma elephant ọgbara ọhụrụ ọ bụla.
4. Anụmanụ Hogle
Enyí ekwesịghị ịbụ ihe e kere eke. A na-edebe Christie na Zuri, nne nne nwa nwanyị naanị ha Ogige Hogle, nke bụ ihe na -erughị nke kacha atọ.
Ekwesịrị ka enyí ndị ahụ nọrọ n'otu nnukwu ọha mmadụ n'ọnọdụ kacha mma. Ọ bụghị zoo kacha njọ n'ụwa, mana ọ bụghị nke kacha mma.
5. Ogige Anụmanụ Seneca Park
A na -ahụ enyí naanị na ihu igwe dị ọkụ. Ha nwere ike ịnagide oyi ruo obere oge, mana emeghị ha maka oge oyi New York.
N'ihi oyi, ụfọdụ enyí na Ogige Seneca enwewo ọrịa, gụnyere ọrịa ogbu na nkwonkwo siri ike.
Otu enyí nwụrụ n'oge na -adịghị anya n'ihi nke a n'ihi na ọ nweghịzi ike ịnagide ọtọ.
6. Anụmanụ Pittsburgh
Ala a maara nke ọma na mpaghara nlekọta anụ ọhịa dị ka ihe na-emerụ enyí. O di nwute, na Ogige Pittsburgh o yighị ka ọ na -enwe nchegbu.
A na -ejigide enyí n'ime ụlọ a kpụrụ akpụ, nke na -ebute ahụ erughị ala na adịghị ike anụ ahụ.
7. Ogige Memphis
Iji malite, Memphis Zoo nwere njikọ chiri anya na ihe nkiri. Tupu 'ịla ezumike nká' 'n'ogige ụmụ anụmanụ, enyí ndị nọ n'okpuru' nlekọta 'ha emeela mmeso ọjọọ na mmemme egwuregwu.
Ogige Memphis, otu n'ime ụlọ ezumezu kacha njọ na mba ahụ, na -etu ọnụ na ọ nwere enyí Africa kacha ochie na North America, mana ọ na -eleghara eziokwu ahụ anya na enyí na -adị ogologo ndụ n'ime ọhịa.
8. Myrtle Beach Safari
Ihe nkiri Netflix "Tiger King: Murder, Mayhem, and Madness" nọ na ịntanetị n'oge mmalite nke ọrịa 2020. Otu n'ime ụlọ ezinaụlọ a tụlere n'ihe nkiri a bụ nke a.
Afọ, enyí Africa, na -anọkwa iche, ebe usoro a lekwasịrị anya na nnukwu nwamba nọ ebe ahụ. Bhavagan Antle, onye nwe ụlọ ebe a na -edebe anụ ọhịa, na -ekwu na ya anapụtala afụ.
N'ikwu eziokwu, ọ zụrụ ya azụ na 1980, na -agbadosi ike ọnọdụ ya na ndepụta nke zoos kacha njọ, ma ọ bụrụ na ị nwere ike ịkpọ ya.
Akwarium kacha mma na USA
Akwarium Georgia (Atlanta, Georgia)
Dị ka nnukwu akwarium n'ụwa Georgia akwarium na -akpọ ndị ọbịa ka ha bịa shark, ụzarị, dolphins, penguins, ọdụm oke osimiri, akàrà, na wugles beluga!
Ụlọ ọrụ ihe atụ a dị n'Atlanta na -ekwekwa nkwa ọgwụgwọ pụrụ iche maka ụmụaka - ohere wade n'ime ọdọ mmiri juputara na ndụ mmiri na -amị amị, na -akọ akụkọ, na -eme nka, na -ejikwa ihe odide na ejiji oge.
Akwarium National (Baltimore, Maryland)
The Akwarium bụ ụlọ ihe fọrọ obere ka ọ bụrụ obere anụmanụ 20,000, nke ga -ezuru ndị na -ahụ anụmanụ n'anya nke afọ niile. Enwere ebe obibi coral reef nke Indo-Pacific jupụtara na shark reti na azụ dị iche iche.
Ọzọkwa, ihe ngosi yiri mgbanaka, ihe ngosi Shark Alley nke dị 225 galọn na-enye ndị ọbịa ohere isoro ndị anụ ezé na-eri anụ nọrọ onwe ha nso. (Ahụla nnukwu azụ shark ruo mgbe ị ga -apụ.)
Mmiri mmiri Monterey Bay (Monterey Bay, California)
N'ịbụ nke dị na Cannery Street, Monterey Bay Aquarium bụ ụlọ agụmakwụkwọ na nchekwa ihe nwere ihe karịrị ụdị azụ 500 dị iche iche nke ndụ mmiri.
Na mpaghara ịkwọ ụgbọ mmiri na -emekọrịta ihe, ụmụaka nwere ike igwu egwu n'elu akwa mmiri, nyochaa oke ọhịa algae na -atọ ụtọ ma lelee nri penguins. (Ndị nne na nna ji n'aka na ha ga -ekpori ndụ.)
Ọdọ Mmiri New England (Boston, Massachusetts)
Na -eme atụmatụ ezumike ezinụlọ na Beantown? Gaa ozugbo na New England akwarium.
Nnukwu nnukwu osimiri a na ọdụ ụgbọ mmiri Boston nwere ihe ngosi mmekọrịta (ọdọ mmiri ọdọ mmiri Shark na Ray ga-ahụrịrị), nnukwu sinima IMAX 3D, na nlegharị anya nlegharị anya whale na mmekorita ya na Boston Harbor City Cruise si Central Wharf.
Akwarium akụrụngwa Oregon (Newport, Oregon)
Kedu ihe na -adọrọ mmasị banyere Aquarium Oké Osimiri Oregon? Ọ dị mma, ọ dabere na awa ole ị nwere n'efu.
Laghachi n'oge akụkọ ihe mere eme na Cruisin 'Fossil Coastline, lelee ọdụm oke osimiri na akàrà ka ha na -amali elu na mmiri, gbalịa ịhụ nnukwu octopus Pacific na -enweghị atụ, ma mụta maka mwepụ Coho salmon kwa afọ.
Akwarium azụ (Chicago, Illinois)
Isi ihe nke Shedd akwarium bụ nnukwu ihe ngosi Great Lakes, nke na -egosipụta ụfọdụ ụdị anụ ọhịa ama ama na mpaghara ahụ.
Ọ na -enyekwa ndị ọbịa ohere izute sturgeon - azụ na -enweghị atụ nke malitere n'oge dinosaur - ma leba anya nke ọma na trow lamprey (ọ bụrụ na ị daa, biko google ya).
Akuku aquarium Seattle (Seattle, Washington)
Site n'ichesi ike na ichebe na ịkwalite ahụike Puget Sound, Seattle Aquarium bụ ebe ezumike ezinụlọ ka ị nwee ọ enjoyụ.
Ọ bara ọgaranya na ndụ mmiri mmiri, site na ọdọ mmiri ọdọ mmiri dị ka ọnya hermit na azụ imi nke gbawara agbawa ruo nnụnụ ndị na-akwụ n'akụkụ oke okwute nke Pacific Northwest, nke na-adịghị emerụ ahụ.
Audubon Aquarium nke America (New Orleans, Louisiana)
Audubon Aquarium dị na America, nke dị na mpụga Quarter French nke New Orleans, na -egosi mgbọrọgwụ ndịda ya na ihe ngosi ndụ mmiri na -adọrọ mmasị nke Ọwara Oké Osimiri Mexico na Osimiri Mississippi.
Enwekwara ihuenyo azụ azụ Geaux na na -akọwapụta ụlọ ọrụ ịkụ azụ Louisiana. Nnukwu ihe a na -amasịkwa na -echebe ụdị ihe egwu nke ịla n'iyi, dị ka penguins Africa na agụ iyi na -adịghị ahụkebe.
Akwarium akụrụngwa ihe omimi (Mystic, Connecticut)
Aquarium Mystic nwere ebe obibi Beluga kachasị na United States. Kedu ka Beluyoga si maa mma na mpaghara mmiri n'okpuru osimiri Arctic?
Kedu ihe kpatara na ị banyeghị n'ime ụwa nke akara akpụrụ akpụ nke ugwu na ọdụ ụgbọ mmiri Steller, ma ọ bụ hapụ ụmụaka ka ha na shark ndị na-anaghị eyi egwu na-emekọrịta ihe n'enweghị nsogbu, ma ọ bụrụ na ịgbatị n'etiti nnukwu azụ whale ezughị ebe ahịa?
Columbus Zoo na Akwarium (Powell, Ohio)
Otu n'ime zoos kacha mma na United States, Columbus Zoo na akwarium na ogige colon na akwarium, nwee naanị ọmarịcha ihe okike nke ụwa.
Mmiri dị iche iche dị n'akụkụ mmiri na akwarium na -akwado ụdị mmiri dị egwu. Kpoo ndị njikwa enyi gị, kpọọrọ ụmụaka ka ha kpọọ ude mmiri na Peep Tudulehapeed Zebra Sharks.
Oké Osimiri Florida (Tampa, Florida)
Florida Aquarium bụ ebe zuru oke maka ịgagharị n'okpuru ndị mmadụ. Ejikọtara ya na ụmụ anụmanụ bi n'ime mmiri gburugburu steeti anyanwụ na karịa.
Atumatu nchekwaba na -elekwasị anya na mbe mbe mmiri, ọmarịcha coral na azụ shark. Ị chọrọ ịhụ nnukwu anụ mammals na mmiri? Hop banye na mmụọ Bahía II nke njem dolphin dị nkeji iri asaa na ise nke ndị ndu ebumpụta ụwa na-eduzi.
Ọdọ Mmiri New York (Brooklyn, New York)
Anyị na -atụ anya na nnukwu njem nlegharị anya Apple ya nwere ohere maka ihe nkiri ndị ọzọ n'ihi na Akwarium New York ekwesịghị ịla n'iyi.
Chere ihe ngosi na-atọ ụtọ na itule, ịnya ụgbọ ala, nri nri, ezute anụ ọhịa, na nwụnye ihe ngosi ọkacha mmasị, nke na-elekwasị anya na ndị ọbịa dị oke egwu, dị ka ude mmiri ọnwa, ikpuru ọnwa, ikpuru zombie, na octopus nke Pacific nwere ọgụgụ isi. .
Tennessee Akwarium (Chattanooga, Tennessee)
Ị maara na osimiri Otter nke North America na -eji flaps pụrụ iche nọrọ n'ime mmiri ruo nkeji asatọ n'otu ume?
Kedu maka modulu pụrụ iche, a na -emepụtaghachi ajị anụ tiger (ntụnye: gụnyere mgbọ intrauterine)? Ndị a bụ ụdị eziokwu na -atọ ụtọ nke ukwuu ị ga -amụta maka Aquarium Tennessee n'etiti Chattanooga.
Oke Osimiri Maui (Wailuku, Hawaii)
Enwere ọtụtụ ihe ị ga -eme na Hawaii. Ọ bụrụ na ị kpuchiri ihe omimi nke nchekwa oke na mmiri, etiti nke Ocean Center De Maui kwesịrị ọnọdụ na ndepụta ahụ.
Ọ bụ ebe dị egwu ịhụ ntakịrị akara nke ndị mọnk Hawaii na mbe mbe mmiri. Mmemme Ocean Aloha na -akuziri nne na nna na ụmụaka mkpa ọ dị ilekọta gburugburu ebe obibi n'okpuru mmiri.
Ripley's Aquarium nke ndị na -ese anwụrụ ọkụ (Gatlinburg, Tennessee)
Ọ ga -ekwe omume na ọ nweghị ike ịtụ anya na obodo Gatlinburg Tennessee na -adọrọ mmasị ga -enwe ezigbo ebe obibi mmiri, mana ihe ijuanya… ọ na -eme!
The Ripley's Aquarium nke ndị na -ese anwụrụ ọkụ na -enye ndị ọbịa oche n'ihu ụwa okpuru mmiri nwere ihe ngosi ụgbọ mmiri na Glassbottomed, yana ọtụtụ ebe azụ.
A ga -anwale ndị na -eto eto karịsịa site na mmetụ a na -akpọ mmetụ na Ray Bay na ahụmịhe eserese nke Penguin.
Anyị nwere olile anya na ị hụrụ akụkọ a n'anya na ọ baara gị ezigbo uru. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ma ọ bụ aro ọ bụla, biko mee nke ọma ịhapụ ikwu okwu yana kwa, gị na ndị enyi gị kerịta akụkọ a.
Dị ka Loading ...
Tags:zoos kacha mma na California, zoos kacha mma na ugwu ọwụwa anyanwụ, zoos kacha mma na US 2020, nnukwu zoo na US, 10 kacha zoos na US 2019, 10 kacha zoos n'ụwa, zoos kacha mma n'ụwa, usa taa zoo kacha mma (2020)
Ihe omume 10 kacha atọ ụtọ na ihe ọchị na Houston maka ndị okenye
Ihe ihunanya na-akpali mmụọ na-eme na Tampa maka ndị di na nwunye
Daysbọchị Nkwado Grand Teton National Park na Oge kacha mma ileta
Banyere onye edemede
Victoria Akpan nwere akara ugo mmụta bachelor na Communication Arts na Mahadum Uyo, Uyo, Nigeria. Ọ bụ onye okike nweere onwe ya na onye mepụtara ọdịnaya blọgụ.
Tinye a Comment
Adreesị ozi ịntanetị:*
Albums kacha mma nke oge niile na 13 Kanye West Albums kacha mma
Asacha ihu kacha mma maka ụmụ nwoke nwere ezigbo agwa na ọrụ
Ụlọ oriri na ọụ Bestụ kacha mma na Rome maka nri, Pizza na nri ndị ọzọ anaghị eri anụ
Osisi kachasị mma n'ụwa niile na atụmatụ ha dị egwu
Ọbá akwụkwọ kachasị mma gburugburu ụwa na ebe m ga -ahụ ha
Blọgụ SunTrust Copyright © 2021.
na, site na MyThemeShop.	Laghachi na Top ↑
%d ede blọgụ dị ka nke a: